Ukuchuma ngeNkqubo yoLawulo lweNtengiso | Martech Zone
Ukuchuma ngeNkqubo yoLawulo lweNtengiso
NgeCawa, Meyi 29, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukuqhuba indawo encinci yokuthengisa ngumsebenzi onzima, ofuna ukuba umnini-shishini abe yinxalenye yentengiso kunye nenxalenye yomthengisi ukongeza ekusebenzeni kweshishini labo. Kutshanje ndifumene inqaku elivela ku-Elliot Yeo ukusuka Ukuphumelela, Isicelo sesoftware esakhelwe ukunceda abathengisi abancinci ngokuqhuba kunye nokuphucula ishishini labo.
Nje ukuba le nkqubo ibe neenkcukacha malunga nentengiso kunye nentengiso yakho, inika iingcebiso eziqinisekileyo:
Kananjalo le nkqubo inenkqubo eneenkcukacha zokulawula intengiso ukuze ikunike ingxelo ngemizamo yakho yentengiso.
Amandla okuPhumelela kukuba ibonelela ngolwazi olumangalisayo kwimisebenzi ngaphakathi kwishishini lakho. Ndingathanda ukubona inkqubo ikwajonga ukukhangela kwendawo iziphumo, ukubeka iliso kwezentlalo kunye neendlela zokudibanisa ukuthengisa ngeselula nangemeyile ngaphakathi kweshishini. Umsebenzi omninzi omncinci wokuthengisa uveliswa ngamashishini aphindaphindiweyo kunye namathuba e-upsell-ukubeka i-imeyile okanye umyalezo obhaliweyo kubathengi bakho kunokuqhuba iidola kwangoko ziye kumgca wakho osezantsi!
Nantsi ividiyo emfutshane echaza ukukhula:
Ukujonga indawo, ndiqinisekile ukuba iqela ligcwele izandla POS indibaniselwano- ke mhlawumbi ukubekwa esweni ngaphandle kwesiza kuya kuza ngendlela!
Sebenzisa iselfowuni ukufumana abaThumeli be-imeyile
IziQhagamshelo eziZenzekelayo zeWordPress